Shaqo ku daalis | Suomen Mielenterveysseura
Harri wuxuu u shaqeyaa shirkad weyn oo uu xafiis madax ka yahay. Shaqadu waa mid badan oo sanadkoo dhan ah. Waxaa dheeri u ahaa Harri shaqada uu mas’uulka ka yahay mashruucyo uu qaatay bilihii ugu dambeyey. Mashruucyadu waxay leeyihiin safaro iyo isagoo aan nasasho helin markuu safarada ku jiro habayaraatee. Iminka shaqadii in yar ayay fududaatay, laakiin Harri weli daal buu qabaa. Toos toosiddiisu way badan tahay oo wuxuu ka fifikiraa shaqadiisa in aroortii lagaaray. Mashruucyo cabsi badanna oo loo dirayana waa diyaar. Harri wuxuu dareemayaa in shaqadan ay tahay mid uu ka bixi karin.
Maxaa Harri la gudboon?
Harri muddo dheer ayay shaqadu culeys ku heysay, oo aanu nasiino ku filan uusan weli helin. Muddadaas dheer ee culeyska shaqada darteed ayaa keeneysa iney ku adkaato oo muddo ku qaadato ku laabashada shaqada. Malaha Harri shaqada u qabto waa mid badan oo aan hal qof qaban karin.
Calaamadaha shaqo ku daalista lagu garto waxa ka mid ah tusaale ahaan ka aaminaadbax dhanka shaqada, farxadda shaqada oo lunta, kalsooni darro iyo xirfadda shaqada oo hoos u dhacda, calaamado jir ahaaneed, sida wadna garaac iyo inta badan dareenka kacsanaanta sare u kaca.
Waxa wanaagsanaan laheyd in Harri wadahadal kala yeesho xaaladdiisa horjoogihiisa shaqada iyo kalkaaliyaha ama takhtarka caafimaadka shaqada. Xitaa waa fiicnaan lahayd haddii uu la hadlo wakiilka shaqaalaha. Haddii fasixii shaqada ee Harri muddo dheer weli ka harsan tahay ama uu fasax ka soo laabtay laakiin uusan dareemeyn nasasho, waxaa habboonnaan lahayd inuu qaato fasaxa jirada. Shaqo ku daalista waa in si aad iyo aad ah looga daxadaraa, waayo daalkaas oo dheeraada wuxuu keeni karaa sidoo kale niyadjab.
Fasaxa jirada iyo nasashada kadib Harri wuu codsan karaa caawinaad dhanka hawsha daryeelka awoodda shaqada iyo baxnaaninta, sida tusaale ahaan adeega baxnaaninta shaqada ee ay bixiso KELA-da. Tusaale ahaan xita SOS-xarunta dhibaatooyinka waaxdeeda baxnaaninta hore waxay bixisaa koorasyo ah horumarinta ladnaanta shaqada.
Xaaladaha shaqada si kastooy ahaataba waa in wax laga beddellaa, si Harri uusan ugu daalin muddo dheer markale markuu ka soo laabto fasaxa jirada ama baxnaaninta. Caddadka, dulucda iyo masuuliyadda shaqada waa in la xadidaa. Sidoo kale safarda shaqada ee isku dhawdhaw dadku inta badan wuu ku daalaa.
Maareynta culeyska shaqada si weyn ayay kuu caawineysaa, taasoo aad adigu saameyn ku yeelan karto cadadka iyo dulucda shaqada. Meelo badan oo ka mid ah goobaha shaqada tan suurtogal kama aha. Si kastoo Harri uu uga taxaddarro nafsadiisa si fiican: hurdi lahaayaa, cunto iyo dhaqdhaaqi lahaayaa in ku filan iyo la kulmi lahaayaa saaxiibadiis, marwalba shaqadu waxay leedahay culeyskeeda, ee kaligaa dadaalka awoodaada ma aha mid ka hortageysa shaqo ku daalista.
Haddii shaqa ku daalista Harri ay bahda shaqaalaha fiican ay uga qeybqaataan si dhab ah oo ay shaqada mar labaad habeeyaan, oo shaqaalu ay qeybsadaan shaqada si ka fiican sidii hore. Waxaa hubaal ah in Harri qeybtiisa ama waaxdiisha shaqada inuusan ahaadeen qof qaba shaqo ku daalista.